Amaholidi ehlobo Ukuvakasha Iholide Ukuhamba | | Amakhasi ombala wamahhala wokulanda
Yenza amaholidi ehlobo isikhathi esiphuthumayo
Umnandi akufanele unakekelwe
Ukugcina othintana nabangani besikole phakathi kwamaholide
Amaholidi ehlobo ezayo. Leli qiniso lenza inhliziyo yomfundi ishaye ngokushesha, njengoba ukuvakasha kwehlobo kuthandwa kakhulu, njengoba leli holide elide liyisikhathi esihle sezingane eziningi. Eqinisweni, ukuphumula kwehlobo kuhle kakhulu ekwenzeni izinhlelo ezihlukahlukene zokwenza.
Okufanele ukwenze emaholide asehlobo
Njengoba amaholidi ehlobo ehlala amasonto ambalwa, kunesikhathi esanele sokwenza ukuvakasha noma ngisho nokuthatha iholidi kwelinye idolobha noma izwe. Kunezindlela eziningi zokwenza amaholidi ehlobo kube yisikhathi esikhethekile.
Iholidi lasehlobo eholidini zasehlobo
Abazali bangavela nezinto ezihlukahlukene zokubasiza ukuthi bakheke le nkathi. Inzalo ibheke phambili kuleli holide elikhethekile kakhulu ngonyaka. Ngenxa yalesi sizathu, abazali bangenza izingane zabo zijabule lapho beqiniseka ukuthi iholidi lehlobo lehlobo liba yisikhathi esingasoze sikalibaleka.
Amaholidi ehlobo ayingxenye ekhethekile kubantwana
Ukulindela kwamaholidi ehlobo kuqala nabafundi abaningi emasontweni ambalwa ngaphambi kwamaholide langempela, ngoba izingane, lezi ziholide zivame isikhathi esihle kakhulu. Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, lezi ziholide ezinde zisho izingane ukuthi akudingeki ukuba ziye esikoleni futhi zithole ithuba lokulala kahle isikhathi eside noma zihlale ziphapheme kusihlwa.
Ngesikhathi samaholidi ehlobo, izingane zinethuba lokukhohlwa ukucindezeleka esikoleni okwesikhashana, ngoba phakathi namaholidi kukhona ithuba lokubuya esikoleni nokucindezeleka kokufunda. Manje-ke, umbuzo uvela ngokuthi kungenzeka kanjani ukwenza amaholidi ehlobo isikhathi esithile. Kunezindlela eziningana zokufeza lo mgomo.
Izingane zingenza okuningi phakathi namaholide. Inkathi efudumele ivumela izinto eziningi. Isibonelo, izingane zingaya ngaphandle ukudlala lapho. Izingane eziningi zisebenzisa amaholidi ehlobo ukuze zizinikele ekuzilibaziseni kwazo. Ngaphezu kwalokho, amaholidi anika isikhathi esifanele sokuqala ukuzilibazisa okusha.
Imidlalo iphinde ibe yithuba elihle kubantwana abaningi ngesikhathi samaholidi ehlobo. Imindeni ingasebenzisa amaholidi ehlobo ukuhamba ngezindawo ezahlukeneyo, ukuze usebenzise kahle isikhathi seholide, ngoba lapho uhamba nomndeni, wonke amalungu omndeni angaba mnandi kakhulu.
Sebenzisa isimo sezulu esihle sehlobo ukuhamba nomndeni
Ehlobo, ngenxa yesimo sezulu esihle, ngokuvamile kuvame ukuthatha uhambo nomndeni wonke, lapho umndeni ungazithokozisa khona. Amaholidi ehlobo angasetshenziselwa ukuhlela ukuhamba okuhlukahlukene, njengoba amaholidi angashesha ngokushesha uma kungekho izinhlelo zokusebenza phakathi nenkathi yeholide.
Amaholidi ehlobo ahlanganisa amasonto ambalwa lapho umndeni ungahamba khona ezindaweni ezahlukene. Isibonelo, kukhona ithuba lokuvakashela i-zoo, iya echibini lokubhukuda, uchithe isikhathi esingaphandle noma uhlele ukuvakashela ipaki yendaba. Ngakho-ke kukhona amathuba amaningi okuvakasha umndeni ongayicabangela ngesikhathi samaholidi ehlobo. Ngaphandle kokuhamba kwansuku zonke, amaholide ngesikhathi sasehlobo nawo abuyele eholidini elide, lapho wonke umndeni ungakhululeka khona.
Imindeni eminingi isebenzisa amaholidi ehlobo ukuze ihambe eholidini. Kufanele kube kuhlelwe iholidi ngamaholidi, ngakho-ke lokhu kuyisizathu esikhethekile sokuthokoza izingane, ngoba iholidi livame ukuhambisana nokuhlangenwe nakho okuningi okuhlukile.
Iholidi lomndeni phakathi kwamaholidi ehlobo liyiqokomisa ngokuphelele izingane eziningi njengoba zingenza izinto eziningi ngenkathi ziholide. Isibonelo, inzalo ingachitha isikhathi echibini lokubhukuda ehhotela. Kodwa iholidi lingasetshenziselwa ukwenza ukuvakasha, ngoba kwelinye izwe, kunezindawo eziningi umndeni ongazithola.
Yiqiniso kukhona nemindeni ezenza ngezizathu ezihlukahlukene phakathi namaholidi ehlobo akakwazi ukuthatha iholide kanye nohambo oluthile nje. Kulesi simo, inzalo ingasebenzisa isikhathi sokutadisha ukuze ulungele kahle ukuqala kwesikole emva kwamaholide.
Amaholide asehlobo adlula isikhathi eside. Njengoba kungenzeka ngokushesha ukuthi izingane zikhohlwe izinto zesikole ngakho-ke zinenkinga lapho isikole siqala futhi emva kwamaholide.
Iholidi lomndeni elinomusa ngesikhathi samaholidi ehlobo
Yiqiniso, akulungile ukuthi inzalo ifunde okuthile ngesikhathi samaholidi ehlobo, ukuze izinto izingane zifunde phakathi nezifundo azikhohliwe. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi abantwana bathathe izincwadi zesikole ngezikhathi ezithile ukuze bafunde ngamaholide.
Abazali banethuba lokusiza izingane zabo ngokuzisiza ukuba bafunde eholidini. Kodwa-ke, amaholidi ngokuyinhloko aphule isikhathi esikoleni. Ngakho-ke, kumnandi ngamaholidi ehlobo akufanele kunganakwa. Phela, wonke umuntu esikhathini sokuphila kwakhe uthola izikhathi ezimbalwa ukujabulela amaholidi ehlobo.
Kunezindlela eziningi zokwenza amaholidi ehlobo ajabule ngenzalo. Akuyona into edingekile ukuba uthathe uhambo olulodwa noma iholidi ukuze unikeze izingane zibe mnandi ngesikhathi samaholide.
Imindeni nayo ingasebenza ndawonye ekhaya ngezingxoxo ezihlangene ezingasetshenziswa ukuhlela leli holide.
Isibonelo, abazali bangadlala imidlalo nezingane zabo phakathi namaholide. Imindeni eminingi isebenzisa ukuphumula ehlobo ukuchitha isikhathi ndawonye. Izingane nazo zinethuba lokuhlangana nabangane esikoleni ngesikhathi samaholide.
Wonke umntwana unamapulani ahlukene kakhulu ngamaholidi ehlobo. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi izingane ezifunda nabo zikwazi ukubonana phakathi kwamaholide. Iningi lezingane libaluleke kakhulu ekuboneni abangane babo phakathi namaholide. Ikakhulukazi eholidini elide ehlobo, kungenzeka ukuthi izingane zilangazelela abangane babo esikoleni.
Uma lokhu kwenzeka, kukhona ithuba lokuthi izingane zizokwenza i-aphoyintimenti yokudlala, ngoba-ke, izingane ezifunda nabo nazo zingabonana ngesikhathi samaholide bese zichitha isikhathi ndawonye.
Kungakhathaliseki ukuthi yini ehlelwe amaholidi ehlobo, abazali bangasiza izingane zabo ukuba zenze amaholidi kube yisikhathi esihle ngokuvumela izingane zabo ukuba zibe yintsana ngesikhathi sokuphumula.
Amatende | Amaholidi eholide
Endaweni yokuzijabulisa nomndeni | Amaholidi eholide
Ukuphumula kwezempilo kubazali | Iholidi leholide leholide
Ngomoto nomndeni ngesikhathi sokuphumula
Ukuhamba ngebhayisikili nomndeni | iholide
Ukuhamba nomndeni | iholide